Kachin Duwa: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖယ်ဒရယ် အကြောင်း စပြောပြီ..
ဖက်ဒရယ်မူ ကျင့်သုံးခြင်းကို ယုံကြည်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအတွက် မှန်ကန်သည့် မူတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖက်ဒရယ်မူ ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားများ အချင်ချင်း ဝေးကွာစေမည့် အစား ပိုမိုနီးကပ်လာစေမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း အာဆီယံခေါင်းဆောင် ၁၀၀ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (Asean 100 Leadership Forum) ဟောပြောမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အာဆီယံခေါင်းဆောင် ၁၀၀ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (Asean 100 Leadership Forum) ဒုတိယနေ့ အစီအစဉ်တွင် Resilience in Turbulent Times ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဟောပြော လျက်ရှိနေပါသည်။
(၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင် ၁၀၀ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့နှင့် ၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
81Like · · Share
Maung Dipa, Myo Gyi, Ko Naing Naing Win and 346 others like this.
Min Chitea ဒါလေးပြောပါ၇စေ..... Please allow me to say this ....Evenadrop of blood from ethnic clashes is too much for my beautiful BURMA. It's about time to Stop arm clashes and Bloodshed , also time to Compromise , Build mutual trust , benefit , understanding and Respect each other .If we have FEDERALISM , We don't have arm clashes. Federalism is the best to have the GOODWILL among the ethnic people. In Burma Political power had come from the barrel of the gun starting 1962 and because of no Federalism , Bloodshed is all over the country. FEDERALISM is not separation , it is fair distribution of power and wealth among the states. FEDERALISM is the one and only way to stop arm clashes and bloodshed. Regarding further discussion please emphasize on FEDERALISM for the whole country and to form strong Federal Defense Services with all ethnic people.....1947 Constitution was amended by two houses in 1960/61 for Notorious General Ne Win's Care Taker Government ......2008 constitution can be amended by two houses without Referendum ........We are lucky to have Daw Aung San Su Kyi as our leader in our life time.
Yesterday at 11:01 · Edited · Unlike · 4
Biak Zam Good lecture!...
Thiha Naing ဖက်ဒရယ်မူဆိုတာဘာလဲဟင်။ တယောက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလား။
Yesterday at 11:36 via mobile · Like
Aung Myint Han ဖယ်ဒရယ်အကြောင်း ပြောလာကြတာ ဝမ်းသာစရာ
ဘာလို့များ အရင်က မပြောကြတာပါလိမ့်
Yesterday at 11:55 via mobile · Like